“Waan ku faraxsanahay inaan ugu dambeyn iska reebnay Inkaartii naga heysatay Anoeta .”. – Gool FM
“Waan ku faraxsanahay inaan ugu dambeyn iska reebnay Inkaartii naga heysatay Anoeta .”.
(Spain) 15 Jan 2018. Tababaraha Barcelona Ernesto Valverde ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin inay ugu dambeyn jabiyaan Inkaartii ka heysatay gegada Anoeta halkaa oo ay ku soo badin tan iyo 2007.
Guusha Barca waxaa dhadhan u sii yeelaya inay ka soo kabatay 2-0 ay ku hogaamineysay Real Sociedad iyadoona u badeshay 4-2, waana mid ka mid ah kulamadeedii ugu shidnaa ilaa iminka horyaalka xilli ciyaareedkan.
“Garoonkasta ayaa dhibco ku soo lumin kartaa,” Valverde ayaa sidaa yiri.
“Waan ku faraxsanahay inaan iska reebnay Inkaartan, gaar ahaan sida aan isaga reebnay oo ahayd in labo gool nalagu hogaaminayay.
Valverde oo wax laga waydiiyay 19-ka dhibcood ay ka sarreeyaan Real Madrid ayaa yiri:
“Isku soo wada duuboo, Kama fikireyno waxyaabo waa wayn.
“Talaabo talaabo ayaan u soconeynaa qolka dhar badelashada innagoo ilaalineynaa dareenka caadiga ah iyo isku dheeli tirnaanta.
“Waxaan dooneynaa inaan ku sii socono isla dariiqa, laakiin waxaan aaminsanahay inaan si ka fiican sameyn karno.”.
RASMI: Axmed Macaani oo ku biiray kooxda Elman
Jordi Alba oo BAXAR ku Jira kaddib markii uu taagay Farta Dhexe